Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka oo ka hadlay khudbaddii uu xalay jeediyey ra’iisul wasaare Rooble | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka oo ka hadlay ...
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka oo ka hadlay khudbaddii uu xalay jeediyey ra’iisul wasaare Rooble
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa ka fal-celiyey khudbaddii uu xalay jeediyey ra’iisul wasaaraha xilka sii-haya Mudane Maxamed Xuseen, kadib markii lagu wareejiyey doorashada iyo amnigeeda.
Mahad Salaad ayaa sharraxaad dheer ka bixiyey hadalka ra’iisul wasaaraha, wuxuuna ku soo koobay saddex qodob oo ku aadan doorashada, arrimaha amniga iyo ciidamada.
1.	Arimaha amniga wuxuu sheegay in uu la soo wareegay Amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka.
– Amniga doorashada waa howl farsamo mas’uuliyadeedana waxaa iska leh Ciidanka Booliska heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed. Waana shaqo uu qaban karo Taliye Saldhig isagoo kaashan kara cidii uusan uga maarmeyn. Lkn waxa la isku hayo intaas waa ka mug
weynyihiin, taasoo ah awaamiirta Taliyeyaashu bixinayaan, cida ay ka amar qaadanayaan iyo siyaasaadka ay ku shaqaynayaan. Rooble waxa laga sugayay in uu mas’uuliyada amniga si buuxda ula wareego, badalana Taliyeyaasha dhiiga gacmaha kula jira ee hormuudka ka ahaa dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho.
– Fulinta Qorshaha Amniga ee Rooble sheegay hadii uu yahay midkii Farmaajo shalay Golaha Shacabka ka hor sheegay waxaba isma badalin wali, waxayna ka dhigantahay in Farmaajo wali yahay Taliyaha Ciidamada Qalabka Sida, Rooblena uu yahay fuliyaha qorsheyaasha Farmaajo. Walina waxaan aqrisanaynaa casharadii Farmaajo muddada afarta sano ah noo meerinayay ee ay ugu dambeeyeen weerarkii 19-kii Febraayo uu ku qaaday Madaxweyneyaal, Ra’iisul Wasaare, Musharaxiin, Xildhibaano, Siyaasiin iyo Shacab si nabad ah u bannaanbaxaya. Weerarkii 14-kii iyo 16-kii Abriil lagu qaaday Taliyihii Booliska Gobolka Banaadir Gen Saadaq Joon iyo duulaankii qorshaysnaa ee guryaheena lagu soo qaaday 25-kii Abriil ee dad shacab ah lagu laayay kuwa kalena lagu barakiciyay, Ciidamada Qalabka Sida-na ku burbureen oo maanta aagag dagaal isaga soo horjeedaan.
2.	Ciidamada wuxuu yiri mucaarad iyo muxaafid malahan waxaanan farayaa in ay xeryahooda ku noqdaan, kana fogaadaan in ay ku milmaan arimaha siyaasada. Sidoo kale wuxuu sheegay in loo saarayo gudi farsamo oo ka soo talo bixiya arimaha siyaasadeed ee saameynta ku yeeshay ciidamada.
3.	Qodobka ugu dambeeya waa arinta ku saabsan shirka DF iyo DG ee Rooble sheegay in uu ku baaqi doono. Rooble iyo Farmaajo waxay ka mideysanyihiin in aan waxaba lagu darin heshiiskii 17-kii September iyo talo soo jeedintii 16-kii Febraayo wax sharuudo ahna aan lagu xirin. Sida labadooduba shalay ay ku sheegeen khudbadahooda.
– Waxaan su’aali lahaa Ra’iisul Wasaare Rooble hadii howshu sidaas u fududahay maxay Madaxweyneyaasha DG Muqdisho u fadhiyeen mudo 45 cisho, shirkuna u fashilmay, sababayna in dagaal ka dhaco magaaladan
Ra’iisul Wasaare Rooble waxaan leeyahay abtiyow dhiiqadii Farmaajo lugaha kula jiray yaan adiga lagaaga dhex siibanin ee si xikmadeysan arintaan u wajah, dadkana talada wax ka sii. Kuwa xamaasadeysan ee raba cadiifad in ay ku majoxaabiyaan dadaalkeenana waxaan leenahay walaaleyaalow Ilaahey iimaanka ha idin geliyo.
Previous articleWasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi eedayn u jeediyay madaxweyne Joe Biden
Next articleAfhayeenka dhusamareb “ Lama aqbali karo dhismaha wadadaan oo ay jarayaan ciidanka nabad galyada wadooyinka Caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb
Waxaa goor dhawayd magaalada Muqdisho ka dhacay Rasaas lagu riday gaadiid uu la socday Madaxweynihii hore ee Somaliya xasan shkh maxamuud. Warar hor dhac ah...
War deg deg ah Gudoomiyaha degmada Xamar jajab oo la dilay...
toobiya oo beenisay in hubka kiimikada ay u adeegsatay gobolka Tigray...